တွဲဖက်မသောက်သုံး သင့်သောအစား အသောက်နှင့်ဆေးဝါးများ | Page3| Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
တွဲဖက်မသောက်သုံး သင့်သောအစား အသောက်နှင့်ဆေးဝါးများ
Vit K Agonists / Anticoagulants (သွေးကျဲဆေး)
30.1.2016 | တွဲဖက်မသောက်သုံး သင့်သောအစား အသောက်နှင့်ဆေးဝါးများ
ဥပမာ - Warfarin
Anticoagulants တွေက သွေးကြောအတွင်း သွေးခဲများဖြစ်ပေါ်လာခြင်းနှင့် ကြီးထွားလာခြင်း တို့ကို လျှော့ချပ...
29.1.2016 | တွဲဖက်မသောက်သုံး သင့်သောအစား အသောက်နှင့်ဆေးဝါးများ
ဥပမာ 1. Bumetanide
28.1.2016 | တွဲဖက်မသောက်သုံး သင့်သောအစား အသောက်နှင့်ဆေးဝါးများ
ဥပမာ 1. Albuterol
Bronchodilators ဆေးတွေကို ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါ (Ast...
Analgesics / Antipyretics (အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး၊ ကိုယ်ပူကျဆေး)
27.1.2016 | တွဲဖက်မသောက်သုံး သင့်သောအစား အသောက်နှင့်ဆေးဝါးများ
I. Analgesics / Antipyretics (အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး၊ ကိုယ်ပူကျဆေး)
Antihistamines (ဓာတ်မတည့်ခြင်း (Allergy) နှင့် နှာစေးပျောက်ဆေး)
26.1.2016 | တွဲဖက်မသောက်သုံး သင့်သောအစား အသောက်နှင့်ဆေးဝါးများ
ဥပမာ 1. Brompheniramine